Waxaan ku tuseynaa bogag shabakado leh ilo bilaash ah oo loogu talagalay shaqadaada | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | General, Khayraadka
Had iyo jeer waa markaan galno bog si aan u raadino ilo, u eegno isbeddellada ama si caajis la'aan ah. Waqtigaas aan ku dhex soconno webka, Boom! Daaqad daaqad Waqtigaas, waad ogtahay waxa ay doonayaan inay kuu sharxaan, sidii aad horeyba khabiir u ahayd oo aad u xirto sida ugu dhakhsaha badan ee aad kari karto. Tani waa sababta ay tahay inaad uqorto bogaggan.
Haa, waa farriin kuu sheegaysa sida ay u fiicnaan lahayd haddii aad ku biirto degelladooda. Waxaad gashaa e-maylkaaga oo farriimo cajiib ah oo tiro badan ayaa gaari doona sanduuqa emaylkaaga. Cajiib oo maahan iyaga, waxay kuu sheegayaan in sidan aad "wax walba ku ogaan karto" hadda kadib mahadsanid macluumaadka ay ku siinayaan.
Waan ku aqaan oo ku fahmay. Cinwaanka ayaa umuuqda mid aan la fahmi karin waxa aan dhahayo sidoo kale, waxay umuuqataa inaysan macquul aheyn inay jiraan degello websaydha ah oo sameeya. Laakiin aan caddayno shakiga.
1 Maxaan ugu qori karaa kuwan?
2 Abuurista khadka tooska ah
4 Hal abuurka
5 Sawir gacmeed
6 Sawirada Dribbble
Maxaan ugu qori karaa kuwan?
Qofka hal-abuurka leh wuxuu u baahan yahay qalab badan si uu awood ugu yeesho inuu kasbado marka la naqshadeynayo. Ama rinjiyeyn, iyada oo loo marayo kumbuyuutar ama qaabab sawir. Meelahan websaydhadu waxay bixiyaan qalab noocan oo kale ah oo loogu talagalay naqshadeeye muuqaal ah, maaddaama ay horumariyaan shaqooyin bilaash ah ama ay wadaagaan qoraalkooda shaqooyinka gebi ahaanba 'siidaysay si kor loogu qaado qorayaashooda.
Kuwani waxay waxtar u leeyihiin, dhammaan wixii ka sarreeya, dadka shaqo bilaaba iyaga oo aan helin faa'iidooyin waaweyn ama xoogaa faa'iido ah xitaa. Xaaladaha aanad awoodi karin qalab gaar ah ama rukumo. Soo-koobnaanta alaabooyinka aad wada hayso oo aan lahayn calaamadda 'burcad-badeed' ayaa diyaar u ah inay horumariso mashaariicdaada. Waxaan horeyba u siinay tilmaamo si aan ugu hormarino hal abuurkaaga shaqsiyeed, hada waxaan ku dhameystirnay shaqadan qalabka soo socda:
Dabcan, haddii aad rabto inaad sii wado helitaanka macluumaadka ugu fiican iyo aaladaha waaweyn ee aad ku qaban karto shaqadaada, ka hor inta aanad helin waa inaad ku biirtaa Creativos Online. Websaydh hoggaamineed oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan qalabka iyo casharrada si aad u isticmaasho.
Magacan gaarka ah, Sawirka wuxuu diiradda saarayaa bandhigyada muuqaalka ah si loo soo bandhigo mashaariic cusub shirkaddaada ama bandhigyada ardayda ee shaqada dugsiga ama jaamacadda. Nooc mashruuc ka mid ah oo aad kor ugu sii kacaya oo tartankiisu sii kordhayo. Bandhigyo fiican oo tiro badan oo bogag ah iyo fursado ayaa ku siinaya fursad aad ku hesho foomam iyo tilmaamo aad ku abuuri karto mid kuu gaar ah. Oo yaa garanaya, isagoo awood u leh inuu iibiyo.
Sidoo kale, dhammaan qaababka suurtogalka ah ee Google Slides, Muhiim u ah mac-gaaga ama PowerPoint haddii aad PC leedahay. Xitaa soo dejiso dhammaantood si aad u ogaato sida looga shaqeeyo mid kasta oo iyaga ka mid ah haddii aad fursad u leedahay.
Shaqo kasta oo cusub, waxay u diraan e-mayl macaamiishooda si ay uga digtoonaadaan mashruuc cusub si aad u soo dejiso. Maskaxda ku hay in wax walba aysan xor aheyn oo ay jiraan xaddidaado gaar ah oo ku saabsan dhammaan bogagga, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay, waxaa jira fursado aan dhammaad lahayn.
Websaydhka 'CreativeBooster', inkasta oo ay tahay isku socod, waxay leedahay qalab kala duwan. In ay 'Lema'"Fonts Bilaash ah, Mockups iyo Graphics" wuxuu si cad u sheegayaa in noocyada, majaajillooyinka ama sawirada daabacan sida resume ay yihiin kuwa ugu degsashada badan shabakada.
In kasta oo ay sidoo kale jiraan kaararka ganacsiga ee shirkaddaada iyo naftaada labadaba haddii aad rabto inaad isku dhiirrigeliso sidii madax-bannaanide ama, yaa garanaya, maal-qabeen.
Maya, shaqo kuma laha leh burger wadajir ah sidoo kale naqshadaha kuma koobna hamburgers ama cuntada degdega ah. In kasta oo ay haa tahay, sida laga soo xigtay iyagu waa «Naqshado dhadhan fiican leh oo loo sameeyay taxadar pixel kasta«.
Sidii hore loo soo sheegay, kheyraadkani waxay u adeegaan inay kugu dhiirrigeliyaan raadintaada naqshad dhulgariir ah oo kaa caawin doonta suuqa. In kasta oo ay yihiin, badanaa ma aha ilaha ganacsiga loo adeegsado waana kuwo si gaar ah loo adeegsado. GraphicBurger wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa sheegashadooda marka aad hesho naqshad isaga ah. Waxay kuu oggolaanayaan isticmaalkaaga shaqsi iyo ganacsi, marka waa inaadan ka welwelin markaad isticmaaleyso. Dabcan, waxa ugu fiican ayaa ah inaad sameysid naqshad kuu gaar ah si ay u noqoto mid gaar ah, inbadan oo aad jeceshahay waxaad lahaan laheyd isla mashruuc markii aad si guud u soo bandhigeysay.
Mockups iyo icons waa astaamaha ugu fiican. Alaabada funaanadaha ama aaladaha 3D iyo aalado kale oo badan oo ka duwan kuwii aan ku soo bandhignay degellada hore.
Waan tagnay Sawirada Dribbble tan dambe, ma aha sababta ugu yar ee muhiimka ah, laakiin maxaa yeelay waxaan horay uga soo hadalnay ku saabsan barnaamijkan at CreativosOnline. Laakiin way fiicantahay in loo xasuusto mashruucan kala duwanaanshaheeda wax soo saarkeeda iyo tayo aad u wanaagsan. Markii ugu horreysay ee aan ka hadalno barnaamijkan waxay lahayd mashruucyo kooban, maanta waxay leedahay noocyo badan oo aad ka faa'iideysan karto.
Haddii aad weli u malaynaysid inaadan iska qorin meelahaas, waa sababta oo ah weli ma aadan riixin xiriidhada waxaadna aragtay noocyadooda kala duwan. In kasta oo dhammaan boggaga internetka ee aan halkaan ku soo wada hadalnay ay ku qoran yihiin af Ingiriisi, haddana way kuu sahlanaan doontaa inaad dhex gasho oo aad hesho soo dejinta aad u baahan tahay xilligan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waxaan ku tuseynaa bogag shabakado leh ilo bilaash ah oo loogu talagalay shaqadaada
Isku-dubarid farshaxanka sameynta sawirrada qaabka frankenstein ah
Isbedelada ay tahay inaad uqaadato si ay u noqdaan kuwa hal abuur badan